I-Laser yeMveliso yeShishini le-Laser, iMveliso yeChiller yaseManzi |S&A Chiller
Ulawulo lobushushu obuchanekileyo lweenkqubo ze-laser kunye nezicelo zemizi-mveliso ukusukela ngo-2002
I-Fiber Laser Chiller
I-Cou2 ye-Laser Chiller
I-U-U-U-U-Uvtra Laser Chiller
Inkqubo yemizi-mveliso iChiller
Amanzi apholileyo chiller
Ukupholisa i-sersedy ye-serding kunye nolawulo lobushushu
Iminyaka engama-20 inamava okupholisa ngokufanelekileyo
S&A I-chiller yasungulwa ngo-2002 eneminyaka engama-20 yamava omveliso e-chiller, kwaye ngoku yamkelwe njengovulindlela ofanelekileyo wetekhnoloji kunye neqabane elithembekileyo kwishishini lase-laser. S&A I-Chiller ihambisa into ethembisayo-ukubonelela ngendlela ephezulu, enokuthenjwa kwaye inamandla kwaye isebenza ngokufanelekileyo i-chieters enobume obuphezulu.
I-viller yethu yokuphinda-phinda yamanzi ilungele iintlobo ezahlukeneyo zezicelo zeshishini. Kunye nesicelo se-laser ikakhulu, siphuhlisa umgca opheleleyo weI-Laser yamanzi e-Chillers, isusela kwiyunithi yokuma kwi-Rack Unit, ukusuka kumandla asezantsi ukuya kuchungechunge oluPhezulu, ukusuka ± 1 ℃ ukuya ± Indlela yokuZinza isetyenziswe.
Besinceda abathengi kumazwe angaphezu kwama-50 ukusombulula iingxaki eziguqukayo kumatshini bawo ngokuzibophelela kwethu kwimigangatho yemveliso, eqhubekayo kunye nokuqonda kweemfuno zabathengi ......
S&A I-Chiller ihambisa into ethembisayo-ukubonelela ngendlela ephezulu, enokuthenjwa kwaye inamandla kwaye isebenza ngokufanelekileyo i-chieters enobume obuphezulu.
Inkqubo ye-chiller ye-chiller cw-6000 3kw yokupholisa umthamo we-5 ukuya kwi-35 ngonyaka
Yokubeka Mount Chiller RMFL-1000 1000W Handheld Laser Welding Machine
Amanzi luthando Chiller CW-6210 Angawokuphumla Operation ± 0.5 ° C Precision wokuziphozisa
I-Chiller Chiller cw-5000 ye-CO2 yeGlasi yeGlasi
Eziphathekayo Water Chiller CWUP-20 Ultrafast Laser and UV Laser ± 0.1 ℃ Stability RS485 Communication
Icandelo elikhulu leShishini leShishini leShishini le-CWFL-12000 ye-12kw Fiber Laser
Ukuba yinkokeli yezixhobo zefriji zefriji
Senza okungaphezulu kokuthengisa nje imveliso
Sinikezela ngenkxaso yabathengi abangama-24/7 kwaye siyikhathalele iimfuno zonke zabathengi ngokubonelela ngengcebiso yesondlo esebenzayo, iSikhokelo sokuSebenza kunye nengcebiso yokudubula kwengxaki ukuba kunokwenzeka. Kwaye kwabo baxumi abathengi, banokulindela inkonzo yasekhaya eRashiya, e-UK, ePoland, e-Mexico, eOstreliya, iSingapore, eIndiya, Korea neTaiwan.
Yonke S&A I-Chiller Sihambisa abathengi bethu igcwele izixhobo eziqinisekileyo ezinokukhusela umchiza ukusuka ekrwada kunye nothuli ngexesha lokuhamba kwexesha elide ukuze lihlale lingena kwiindawo zabathengi.
S&A I-chiller yasungulwa ngo-2002 eneminyaka engama-20 yamava omveliso e-chiller, kwaye ngoku yamkelwe njengovulindlela ofanelekileyo wetekhnoloji kunye neqabane elithembekileyo kwishishini lase-laser.
Ukusukela ngo-2002, S&A I-chiller inikezelwe kwiiyunithi ze-chiller chiedler kunye nokukhonza amashishini ahlukeneyo omzi-mveliso, ngakumbi ishishini lase-laser. Amava ethu okupholisa okufanelekileyo kusenza ukuba sazi into oyifunayo kwaye silucelomngeni ofanelekileyo ojamelene nayo. Ukusuka ± 1 ℃ ukuya ± 0.1 ℃ Ukuzinza, unokuhlala ufumana i-chiller efanelekileyo apha kwiinkqubo zakho.
Ukuvelisa ezona zinto zibalaseleyo ze-larter chilers, sazisa umgca wemveliso ophumileyo kwi-18000m yemveliso yesiseko semveliso ye-18000 yemveliso kwaye setha isebe ukuba lenziwe ngokukodwa i-shini, i-compressor& I-conderser eyinxalenye engundoqo ye-chiller yamanzi. Isikhundla sonyaka semveliso ngoku sifikelela kwiiyunithi eziyi-100,000 ngonyaka.
Ulawulo oluqhelekileyo lomgangatho
Umgangatho yinto yethu ephambili kwaye ihamba kuzo zonke izigaba zemveliso zonke, ukusuka ekuthetheni izinto ezingafunekiyo ekuhanjisweni kwe-chiller. Umchiza ngamnye wethu uvavanywa elabhoratri phantsi kwelebhu yemeko yomthwalo kwaye uthobela i-CE, i-ROHS kwaye afikelele kwimigangatho eneminyaka emi-2 yewaranti.
Iqela lethu lengcali lihlala lisekhompyutheni Side samiswa kwiindawo zenkonzo eRussia, eK, Poland, waseMexico, e-Australia, i-Singapore, eIndiya, i-India, iKorea, eTaiwan ukubonelela ngenkonzo engxamisekileyo yabaxhasi be-versal.
Oko bakuthethayo abathengi bethu
S&A I-Chiller yenza iimveliso ezihle, zisetyenziselwa kakhulu ukupholisa ii-lasers okanye izicelo ezahlukileyo ezifana nokugcina i-CPU ephantsi ngamazantsi.
NdisebenziseS&A Ii-chilers kwiiprojekthi zam ezimbini zomtsalane ze-laser kwaye zenza umsebenzi omkhulu. Kwaye imibuzo yam iphendule ngokukhawuleza.
Shiya i-imeyile yakho okanye inombolo yefowuni kwifom yoqhakamshelwano ukuze sikunike iinkonzo ezininzi!
INTER: + 86-20-89301885
Ilungelo lokushicilela © 2021 S&A Chiller - Onke Amalungelo Agciniwe.